PSG oo diiday in ay ka hadho doonisteeda Hazard iyo Man United & Chelsea Oo Isku Haysta Varane
HomeSuuqaPSG oo diiday in ay ka hadho doonisteeda Hazard iyo Man United & Chelsea Oo Isku Haysta Varane
Kooxda kubadda cagta Fransiiska ah ee Paris Saint-Germain ayaa wali rajo ka qabta in ay garoonkeeda keento weeraryahanka u dhashay wadanka Belgium ee Eden Hazard oo ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan Chelsea.
Sida ay saaka qoreen warbaahinta England, Paris Saint-Germain oo ogsoon in uu Hazard heshiis wakhti dheer ah kula jiro Chelsea, dhowaana heshiis cusub u saxeexay kooxdiisa, ayaa waxa ay haddana dooneysaa in ay Chelsea ku khasabto in ay ka iibiyo laacibkeeda.
Difaacyahanka Paris Saint-Germain Thiago Silva ayaa amaan ballaadhan u jeediyey xiddigan soo baxaya.
Dhinaca kale, kooxaha Chelsea iyo Manchester ayaa tartan xooggan ugu jira difaacyahanka Real Madrid ee Raphael Varane, kaas oo la sheegay in aanu ku faraxsanayn fursadda uu ka helo kooxdiisa.
Sida ay warbaahintu Ingiriisku sheegayso difaacyahankan ayaa door bidaya in uu ku biro koox uu ka helayo boos joogto ah, iyadoo ay labadan kooxoodna doonayaan in ay ka bixiyaan lacag lagu qiyaasay £25 million.
Tartanka Kubadda Kolayga Ee Tima Cadde Oo Meel Xasaasi Ah Maraya Iyo Natiijooyinka Ciyaarihii Dhacay
Wenger Oo Ku Baaqay In La Ciqaabo Ciyaaryahanada Istuur-tuura
Florentino Perez ‘Real Madrid May Gallin Dambi Lagaga Saaro Copa del Rey’